Habboon - Ragga Qaabka Leh | Ragga leh Qaabka (Bogga 3)
Paintball waa ciyaar kooxeed istiraatiijiyaddu ay fure u tahay guusha. Xitaa ka sarreysa khibrad shaqsiyeed ama xirfado.
Ma leedahay buro futadaada? Halkan ka ogow astaamaha, daaweynta, dhibaatooyinka iyo waxyaabaha sababi kara xanuun la'aan ama xanuun iyo cuncun.
Sidee looga fogaadaa muranka lammaanahaaga haddii aad gasho fasax?
Ciidaha ayaa habboon. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa waqtigii, sida laga soo xigtay tirakoobka, soo bandhigaya kororka heerka furiinka.
Jalaatada ayaa ka badan macmacaanka. Waad ku mahadsan tahay saldhigooda caano, waa cunno nafaqo leh. Waxay ka koobnaan karaan kaalshiyamka, borotiinka iyo fiitamiin B2.
Xilliga xagaaga, bakteeriyadu si dhakhso leh ayey u tarmaan, waxayna u badan tahay inay ku dhacdo infakshan. Sababtaas awgeed, waa wax caadi ah in la helo fungi.
Maxay gabadhaada ku habboon ay leedahay?
Waxaa jira waqti nolosha ka mid ah oo aad bilaabeysid inaad isweydiiso inaad la joogto qofka saxda ah. Taasi waa, waxaad isweydiineysaa inaad la joogto gabadhaada wanaagsan.
Talooyin ku saabsan sidii aad uga gudbi lahayd burburka
Way adagtahay in laga gudbo kala tag iyo in laga takhaluso qof ka qayb qaatay nolosheena muddo dheer maskaxdeena. Waxay noqon doontaa hawl gaabis ah.
Talooyin lagu hagaajinayo isku-kalsoonaantaada
Waxaa muhiim ah inaad go aansato inaad ka shaqeyso kalsoonidaada, inaad dareento wanaag naftaada iyo noloshaada. Waa jidka lagu farxo.
Bilooyin daal badan ka dib, culeys ka buuxo, fasaxyadii muddada dheer la sugayay iyo xeebta ayaa yimid; dhexdooda waxaad ku haysataa wakhti aad uga fogaato magaalada.
Heerkulka sare ee xilligan wuxuu kordhiyaa muuqaalka bakteeriyada, taasoo keenta dhibaatooyin xagga mindhicirka ah oo soo noqnoqda haddii aynaan ka taxaddarin.
Khaladaadka laga fogaado bogagga xiriirka
Dhammaan boggaga xiriirka iyo bogagga shukaansiga ee shabakadaha isku mid maahan, dhammaantoodna laguma talinayo. Waa inaad si fiican u doorataa.
Marar badan habeenku wuu yimaadaa mana seexan karno si aan u soo celino tamarteenna. Waxaa la cadeeyay in hurdo la aanta ay qatar ku tahay caafimaadka jirka.
Saladooyinka, oo ka kooban khudradda cagaaran iyo casaanka oo lagu daro dhammaan noocyada maaddooyinka, ayaa ah soo jeedinta ugu wanaagsan ee cashada xagaaga.
Dumarku maxay inaga rabaan?
Tani waa su’aal jawaabteedu u muuqato mid qarsoon. Dhab ahaan, waxaa jira heerar dumarka badankood.
Maxaa ku dhacaya jirkaaga marka aadan hurdo fiican seexan?
Haddii aad daalan tahay maalintii oo aad ogtahay inaadan si fiican u seexan habeenkii, waa waqtigii lagu daaweyn lahaa. Caafimaadka ayaa khatar ku jira.
Daaweynta nadiifinta jirkaaga
Waxaan u baahanahay inaan sameyno wax dhaqso leh si aan u dheelitirno nidaamkeena oo aan dib ugu soo ceshano "caadi". Waa wakhti daaweyn daahirin ah.
Ragga ma leeyihiin cellulite?
Waa caqiido ballaadhan oo ballaadhan in cellulite yahay uun wax dumar ah. Runtii sidaas maahan: ragga sidoo kale waxay u nugul yihiin inay ku dhacaan sharkaan.
Qaar ka mid ah talooyin waxtar leh oo ka dhan ah buurnida
Haddii aan ka warqabno astaamaha dhibaatada, daaweynteeda iyo xallinteedu way fududaan doontaa. Kahortagga buurnida waa lagama maarmaan.
Tilmaamaha si looga fogaado khamriga iyo in la yareeyo
Xad-dhaaf ah isticmaalka khamriga, waqti habeen ah oo ku dhow waaberiga, iyo maalinta xigta hunguriga ayaa soo muuqan doona. Sidee looga fogaadaa?
Cunnooyinka xoojiya xooggaaga galmada
Dunida oo dhan, xoog la'aanta galmada waxay dhibaato badan ku keenaysaa lamaanayaasha. Cunnadu way ku caawin kartaa.
Halkee lagula kulmaa haweenka si ay xiriir ula yeeshaan?
Waxay u adeegsan jirtay baararka is biirsaday, discos iyo meelaha lagu caweeyo si ay ula kulmaan haweenka, sida haddii ay ahayd qaaciddada sixirka, meesha keliya.
Xagaagii waa halkan. Xeebta ayaa ah halka ugu badan ee dadku ku nastaan. Waa maxay kabaha saxda ah?
Ciidaha lamaanayaasha. Waqti lagu raaxeysto, la wadaago, jacayl. Daqiiqado si loo qoto idyll, jacaylka, hamiday.
Cabitaano caafimaad leh marka kuleylka yimaado
Jiilaalku wuu dhammaaday oo wuxuu ku dhammaanayaa baahida loo qabo in la xidho jaakad lana cabbo shukulaatada kulul. Hadda waa xilli kulul oo waxaan u baahan nahay cabitaanno caafimaad qaba.
Guud ahaan, dhibaatooyinka lamaanaha waxaa ka dhasha iswaafajin la'aanta jilayaasha, danaha ama arrimo dibadeed oo saameeya mid kasta oo ka mid ah kuwa jecel.
Saamayn intee le’eg ayuu culeysku ku yeelan karaa jidhkeenna
Waa maxay walwal? Mabda 'ahaan, waa jawaab jir ahaaneed oo jidhkeenu u leeyahay xaaladaha kala duwan ee maalin walba na soo mara.
Miyey fiicantahay in miisaanka la sameeyo? Khataraha cayaartan
Miyey fiicantahay in miisaanka la sameeyo? Tani waa su’aal ay dad badani is weydiiyaan, gaar ahaan markay doonayaan inay beddelaan caadooyinka oo ay hagaajiyaan qaabkooda jireed.
Maxay haweenku ogaadaan markay la kulmaan nin?
Habka ugu horeeya, haweenku sidaa ugama duwana ragga oo waliba waxay fiiriyaan jir ahaan. Waxa ugu horreeya waa in la arko haddii ninku dheer yahay ama gaaban yahay.
Nafaqada saxda ah ee isboortiga ayaa lagama maarmaan u ah inaad ku qabato sida ugu fiican oo aad u yareyso dhaawacyada. Ma kasban doontid dhibco, laakiin waxaad diyaarineysaa mashiinka.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u socoto
Haddii aad u baahato inaad kala beddesho jadwalka iyo ka-goynta maalinba maalinta ka dambeysa, socodka dheer waa xulasho aad u fiican. Caafimaad, dabiici ah oo aad u faa'iido badan.
Sidee looga gaashaaman karaa falaaraha qorraxda
Inta lagu jiro xilligan sanadka marka qorraxdu u soo baxdo sida ugu fiican, waxaa muhiim ah in taxaddar laga yeesho falaadhaha qorraxda.
Qaar ka mid ah khaladaadka nafaqada ee kaa ilaaliya inaad miisaankaaga dhinto
Haddii aad go'aansatay inaad miisaanka dhinto, waxaa jira su'aal aad muhiim u ah oo ay tahay inaad ogaato. Kaliya maahan inaad doorato cunto, laakiin sidoo kale caadooyinka cunida caafimaadka leh.
Daawooyinka ugu fiican ee guriga looga hortago xanuunka dhabarka
Cudurada ugu badan ee nolosheena maalinlaha ah, waxaa ka mid ah xanuunka dhabarka oo xanaaqa. Asalka xanuunadan aad ayey u kala duwanaan karaan.
In kasta oo wax dhagtu leedahay shaqo dabiici ah, haddii ay jiraan wax dheeraad ah, waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin badan.
Haddii aad jimicsi badan sameyso, ha ahaato waxqabad isboorti, ama shaqadaada darteed, waa caadi inaad dhidid dhididku ku yaal kilkilaha. Si taas looga fogaado waxaa jira daaweyn guriga ah.
Ma taqaanaa waxtarka ay artichoke u leedahay caafimaadkaaga?
Haddii aad falanqeyso khudaarta keeni karta faa'iidooyinka ugu badan ee jirkaaga, artichoke wuxuu ka mid yahay kuwa ugu caafimaadka badan. Sidoo kale, waxay leedahay dhadhan hodan ah.
Faraxsanaanta iyo nasashada waa furaha nolosha dheer
Waxaan badanaa isweydiineynaa furayaasha nolosha dheer maxay yihiin. Waxaa jira doorsoomayaal badan oo saameyn ku yeelan kara tan, waa arrinta jimicsiga iyo cuntada.
Gacanta robotka ee maskaxda lagu hago waxay ogaataa calaamadaha neerfaha
Soo helitaannada cusub ee gacmaha robotka, waxay ku xirnaan karaan jirka bini'aadamka, iyada oo loo marayo dareemayaasha ama muruqyada jiridda.
Sida loo doorto smartband-ka ugu fiican jimicsiga iyo jimicsiga jirka
Sidee loo doortaa smartband-ka ugu fiican? Inta udhaxeysa moodooyinka kaladuwan waxaa jira faraqyo badan; qaar ka mid ah waxaa ka mid ah la socodka heerka garaaca wadnahaaga.
Furayaasha xulashada furaashka ugu fiican
Waxaan tixgelin karnaa sida loo doorto furaashka ugu fiican. Suuqa waxaan ka heli doonnaa ikhtiyaarro badan, dhammaan noocyada kala duwan ee walxaha, darajooyinka adkaanta iyo qaabdhismeedka.
Ma taqaan daaweynta Invisalign?
Invisalign waa farsamo-dhaqameed ku saleysan beero-fiiqid lagu fidiyo daloolka afka, si loo simo ilkaha.
Miyaad qaabkeedii ka soo baxday? Calaamadaha kuu sheegaya
Markaan qaab ahaan ku jirno, waxaa jira waxyaabo badan oo nolosheenna ka mid ah oo waxtar leh. Waxaan kordhinayaa isku kalsoonaanta, waxaan dareemeynaa wanaag ...
Caadooyin badan oo xun xun oo aad la leedahay ilkahaaga ayaa waxyeello u geysan kara iyaga, isla markiiba ama muddada dhexe ama muddada dheer.
Waxa ay tahay inaan ku xisaabtano guga caafimaadkeena
Si wanaagsan loogu diyaar garoobo guga, waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay inaan tixgalino. Xitaa waan la xanuunsan karnaa cudurada ba'an ee joogtada ah.
Khataraha isku dhafka cabitaanka tamarta iyo aalkolada
Isku darka cabitaanada tamarta iyo aalkolada ayaa muddo dheer soo jirtay, gaar ahaan macaamiisha da'da yar.
Maxay dumarku jecel yihiin ragga? Maxay tahay waxa aadka u soo jiita? Su’aashan waxaa la weydiinayay taariikhda oo dhan.
Dhinaca kale ee macaaneeyeyaasha, khataraha la xiriira
Markii aan ku beddelno sonkorta ku jirta bunteenna macaaneeye, waxaan u maleyneynaa inay tahay ficil caafimaad leh, oo laga fogaanayo kalooriyada xad-dhaafka ah.
Doorashada rugta bacriminta
Waxaan go'aansanay ikhtiyaarka rugta caafimaadka ee bacriminta si aan ubad dhalo, waxaanan qabnaa shaki badan. Waa lagama maarmaan in la falanqeeyo doorsoomayaasha kala duwan.
Rabshadaha jinsiga iyo caawinta haweenka la garaacay
Warku wuu ina sii wadaa. Maalin kasta waxaa jira kiisas cusub oo haween xadgudub ah, mararka qaarkoodna nolol lagu waayo.
Wax soo saarka maqaarka iyo summaddooda, maxaan raadineynaa?
In kasta oo soo-saarayaashu na siinayaan tilmaamo ku saabsan calaamadaha alaabta daryeelka maqaarka, farriintu had iyo goor si buuxda uma cadda.
Cadaadiska shaqada ee dheeraaday wuxuu kordhiyaa halista kansarka
Daraasado dhowr ah ayaa la sameeyay kuwaas oo laxiriira isku-ururinta nolol shaqo oo xoog leh iyo halista kansarka, waxayna muujisay xiriirka jira.
Muraayadaha casriga ah waxay diiradda saari karaan iskood
Muraayadaha casriga ah ayaa dhowaan la abuuray, iyada oo awood u leh inay si toos ah diirada u saaraan wax kasta oo aan eegno. Horumar aad u fiican.
Uurka ragga iyo dumarka. Calaamado isku mid ah marka hore?
Marka haweeneydu ku jirto heerka hore ee uurka, lamaanaheeda waxaa laga yaabaa inuu la kulmo isbeddelo kala duwan oo jirkeeda ah.
Dib u eegida qaar khuraafaadka ku saabsan galmada afka
Muddo dheer waxaan u aragnay galmada afka inay bedel u tahay dhexgalka, iyo sidoo kale inay dhameystir u tahay xiriirkeena galmada.
Qalabka ugu casrisan ee socodsiinta
Xulista qaybo ku dari doona qaabab badan qalabkaaga ordaya, shay had iyo jeer lagu daro dhiirigelin.
Sidee loo diyaariyaa Lemon Champ?
Waxaan ku tusineynaa sida loo diyaariyo liin macaan ama cabitaan macaan oo laga helo jalaatada jalaatada iyo champagne aad jeclaan doonto. Baro sida loogu diyaariyo qaab fudud qaabkeena.
Fikrado ah inaad lammaanahaaga ka dhigto mid jacayl mar kale
Ma rabtaa inaad ka dhigto lamaanahaaga inuu jacayl mar kale ku dhaco? Soo ogow qaar ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee jacaylka si ay kuugu soo muuqdaan adiga maalinta koowaad. Tag!
Waqtiga wasakhda: jirkaaga ku nadiifi qashinkan guryaha lagu sameeyo
In kasta oo aynu ku jirno badhtamihii Ogos, haddana wax aad u yar baa u hadhay soo noqoshada laga baqo ee hawl maalmeedka. Sida ka dib ...
Priapism: waa maxay, sababaha iyo daaweynta
Priapism waa cudur ku dhaca xubinta taranka wuxuuna sababi karaa dhaawac aan laga soo kaban karin. Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay tahay, sababaha, astaamaha iyo daaweynta
Shan isboorti oo gubaya kalooriyo ka badan kuwa socda
Orodku waa isboorti aad u fiican, laakiin markay timaado gubida kalooriyeyaasha ma aha tan ugu waxtarka badan. Shantaan isboorti ayaa ka miisaan badan.
Sida loo dhiso lugaha muruqyada badan sida pro
Waxaan kuu sharraxeynaa jimicsiga ugu fiican ee jira si loo xoojiyo lugaha si dhakhso leh oo waarta.
Ciyaaraha hordhaca ah ee ugu wanaagsan ee aad ku tababbarto lamaanahaaga
Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo dhaqan galiyo afarta kulan ee ugu fiican ee ciyaarta si labada xubnood ee lamaanaha ah ay u gaaraan kacsiga wanaagsan.
Waxaan kuu sharxeynaa dharka kuwa ugu raaxada badan uguna qurxoon baaskiil wadida shaqada, caado caafimaad qabta, u fiican deegaanka oo lacagta badbaadinaysa.
Madaxa si loo shido xiisaha lamaanaha
Waxaan ku siineynaa xulasho madax-madaxeedyo galmo ah oo kaa caawin kara kicinta xiisaha cilaaqaadka.
Phimosis waa mid ka mid ah cudurrada ugu badan ee ragga ay ku dhici karaan xubinta taranka ragga, hase yeeshee badanaa waxay leedahay daawo deg deg ah oo fudud. Waxaan kuu sheegeynaa sida loo ogaado haddii aad leedahay phimosis, astaamo, daaweyn iyo sida loo xaliyo.
Kansarka guska, waxyar oo la ogyahay kansarka
Maqaal xiiso leh oo aan ku dhex milmayno wax kasta oo ku saabsan kansarka guska, kansarka yar ee laga yaqaan ragga ragga.
Gusku waa udub dhexaadka koonka rag badan sidaa darteed waa in loo daryeelaa sida ...
Cudurka Peyronie; cudur naadir ah oo ku dhaca guska
Cudurka Peyronie waa cudur uu nin kasta oo lab ah ku dhici karo xubinta taranka, in kastoo nasiib wanaag uusan aad u badnayn.
Qaababka guska ee ugu caansan
Ragga, qaabka guska ayaa go'aaminaya fulinta mowqifka galmada oo u keenaya qanacsanaanta lamaanaha.
Xalka lagu kordhinayo murqaha hal bil gudaheed
Haddii aad raadineyso inaad kordhiso cufnaanta caanaha sida mudnaanta oo aan ahayn miisaanka oo keliya, waa inaad xoogga saartaa talooyinka soo socda, sidaas darteedna waxaad rajeyneysaa inaad heshid 2 kiilo oo muruq saafi ah oo wax walba si sax ah u sameynaya.
Mid ka mid ah sifooyinka ugu caansan ee loo yaqaan 'nutmeg' waa in la kiciyo xusuusta iyo feejignaanta.
Sidee loo helaa adkeysi dabaasha?
Haddii aadan khabiir ku ahayn qaab dabaal gaar ah, waxaa lagugula talinayaa inaad qaabkaaga u bedesho dhererka.
Calaamadaha, dhibaatooyinka, daaweynta iyo sababaha Balanitis, baro wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato cudurkaan ku dhaca xubinta taranka. Mar dambe ha ka waaban!
Dhowr arrimood ayaa kordhin kara halista kansarka qanjirka 'prostate', sida inuu ka weyn yahay 60 sano, iyadoo qoysaska laga helo kiisaska kansarka qanjirka 'prostate'.
Tabaha lagu nasto
Way ku habboon tahay in la isticmaalo farsamooyin la caddeeyay si loo nasto, yoga, fikirka, is-wacyigelinta, waa qaar ka mid ah hababka kaa caawin kara inaad dareento fiicnaan iyo inaad ka xoreyso ruuxaaga walwalka maalinlaha ah.
Sidee loo isticmaalaa futada futada?
Futada futada ayaa ah toy galmood wanaagsan oo lagu bilaabi karo galmada dabada, wayna ka yartahay oo way ka caqli badan tahay galmada dabada, waxaana marwalba jira dabin dhamaadka ah si adiga ama lammaanahaagu aad si raaxo leh ula tacaashaan, ugana hortagtaan tooyga ka noqoshada gudaha futada.
Soo ogow waxa ay tahay iyo dhammaan faa'iidooyinka gudniinka. Ma dooneysaa inaad ogaato inay saameyn ku leedahay galmada? Soo gal oo soo ogow.
Fofisano, moodada cusub ee ragga dumarka ku waala
Moodo cusub ayaa ka soo muuqday shabakadaha bulshada, fofisano ayaa ah isbeddelka ragga ee ah inay muujiyaan calooshooda iyaga oo aan lahayn dhismeyaal adag. Ama sida loogu faano jirkaaga, xitaa marka aadan taageere u ahayn qolalka culeyska.
Isticmaalka liinta ee ka soo horjeeda finanka
Mid ka mid ah hababka ugu fudud uguna waxtarka badan ee looga takhaluso finanka liin dhanaanta ayaa ah in la miiro casiirkiisa.
Talooyin kor loogu qaado niyadda
Kordhinta niyadda qof murugaysan oo xaaladdiisu xun tahay ma aha wax fudud, sababahan awgood in kor loo qaado niyadda, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in laga feejignaado in wax aysan sax ahayn.
Nidaamka 8-da saacadood ah waa qaab cunno oo ay raacaan dad badan taasna waxay soo jeedinaysaa cunto aad ku cuni karto intaad rabto 8 saacadood, ka dibna aad soonto 16-ka saac ee soo socda
Lammaane nadaafad shaki leh ama xiriir la soo rogay: dumar badan oo diida dhaqankan waxay ku noolaayeen khibrad u reebtay dhadhan qadhaadh iyo inaysan diyaar u ahayn inay dib u bilaabaan.
Tilmaamo si loo qoyo timaha si dabiici ah
Daawooyinka dabiiciga ah waxay noqon karaan kuwo waxtar leh oo caafimaad leh. Tilmaamaha qaarkood sida kuwa aan soo jeedineyno maanta ayaa kuu oggolaanaya inaad qoyaan timahaaga, adigoon u baahnayn wax soo saar macmal ah.
Daawooyinka guriga si loo qoyo kilkilooyinka
Meelaha qaar ee jirka waa ka jilicsan yihiin uguna xasaasiisan yihiin kuwa kale, waxaana ka mid ah meelaha laga helo kilkilooyinka oo si joogto ah u dhibaateeya saameynta dhididka, urta, qorraxda, iyo wixii la mid ah.
Propolis si loola dagaallamo alopecia
Sida laga soo xigtay cilmi-baarayaasha, propolis sidoo kale waxay lahaan doontaa hanti ay kula dagaallanto timo luminta aadanaha.
Maxay haweenku ogaadaan markay arkaan nin?
Tilmaamo si looga fogaado qaniinyada cidiyaha
Caadada xun ee ciddiyaha qaniinyadu waxay leedahay sababo nafsi ah. Waxay qaniini karaan ciddiyaha markay si xun u xakameeyaan shucuurta qaarkood sida gariirka, welwelka ama cabsida.
Waxa xiisaha leh ee siigaysigu waa dhaqan guud. Qof kastaa wuu sameeyaa, gacankuna wuxuu noqon karaa saaxiibka ugu fiican.
Xagaagu waa xilli heer sare u sarreeya aperitifs. Maxaase ka fiican marka ay kulul tahay dhadhaminta is biirsaday dhadhan fiican leh ama biir aad u cusub? Oo maxaad ugu qasmi la’dahay? Aynu eegno lixda is biirsaday ee ugu fiican ee ku saleysan biirka marka ay kulushahay
Miiqyadu waa dhaqdhaqaaq jimicsi oo aad u fudud in lagu dhaqmo isla markaana leh faa'iidooyin kala duwan oo xagga jidhka iyo caafimaadka ah.
Diyaarso bambo nooca loo yaqaan Irish
Baabuurka Irish bom waa cabitaan isku dhafan qaar ka mid ah dhadhanka ugu caansan ee Ireland, sida cherry madow, whiskey iyo kareemka Irish.
Samee is biirsaday Tom Collins
Tom Collins waa mid ka mid ah is biirsadayda ugu caansan ragga. Iyada oo ku saleysan gin, waa cabitaan munaasabadaha oo dhan, oo aad si fudud ugu diyaarin karto guriga.
Mooska, boorashka iyo walnut borotiinka oo ruxma
Bogsiinta borotiinku waa hab fudud oo dhadhan fiican leh oo loogu daro borotiinka iyo nafaqooyinka cuntadaada, gaar ahaan lagula taliyo in la cuno inta u dhexeysa cuntada ama jimicsiga kadib.
Mojito liinta Cuban
Mojito waa mid ka mid ah cabitaanada ugu caansan Cuba iyo Caribbean-ka oo dhan, sidaa darteed waxay ku habboon tahay xagaaga, gaar ahaan haddii aad diyaariso mojito-kan Cuba liinta ah.
Markaad codsanayso cabitaan baarka kasta, mid ka mid ah soo jeedimahan ayaa noqon kara cabitaanka saxda ah ee ragga ee qaabkaaga.
In kasta oo ay u muuqato mid aad u fudud, xadhig boodku waa jimicsi heer sare ah oo jidhka ah, hagaajinta adkeysiga, murqaha iyo xoojinta murqaha.
Cabitaanada si gaar ah ragga
Cabitaanada kaladuwan waxaa badanaa lagu gartaa sida kuwa ragga ama gabdhaha, hadaba maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa xulasho seddex ah oo cabitaano aad u rag ah.
Cunnooyinka ugu fiican ee jimicsiga
Waligey fiiro gaar ah siinin cunida, horay iyo dib ayaan ugu laabanayay qolka jimicsiga, mararka qaar tababar adag ayaan qaatay, laakiin hada waxaan arkaa awooda ...
La yaab leh liin dhanaankan
Liin jiis ah macmacaan daciif ah
Ka hortagga HPV ee ragga
Human papillomavirus (HPV) waa virus guud oo galmada lagu kala qaado. Waxaa jira in ka badan 40 ...
Talooyin ku raaxeysanaya wiish wanaagsan
Whiskey waa mid ka mid ah cabitaannada khamriga ugu caansan, mana aha ragga oo keliya. Laakiin…
Toban cabitaan oo fudud oo guriga lagu sameeyo
Ma waxaad u socotaa xaflad ka dib maanta? Miyaad ku sameysaa horudhaca gurigaaga ama guriga saaxiibkaa? Kadibna waxaan ku siinaynaa ...
Maxay yihiin meelaha ugu wanaagsan ee galmo laga sameeyo?
Sariirta waa goob caam ah oo jacayl lagu sameeyo waxaanan u malaynayaa mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan; laakiin haa…
Kuwa ugu jilicsan jilicsan (oo aan aad u badnayn)
Waan jeclahay smoothies! Waa xagaaga oo aan aad u doonayo inaan wax cabbo. Macaan ka sakow, waa heer sare ...
Waa maxay ginecomastia?
Gynecomastia waa marka balaadhinta cudurada ee qanjidhada mid ama labadaba ay ku dhacdo ragga. Xaaladdan ...
Amarula, Khamriga Koonfur Afrika
Ma aqaano inay dhammaantood yihiin, laakiin in badan oo ka mid ah magaalooyinka ama waddamada adduunka ayaa leh cabitaankooda astaamo. Isaga oo kale…
Absinthe, sida loo cabbo?
Xaqiiqdii waad maqashay khamriga loo yaqaan 'Absinthe', cabitaan khamri ah oo leh dhadhan yar oo sun ah, oo laga mamnuucay dalal badan sababo la xiriira ...
Kondhomku miyuu ku siiyaa dhibaatooyinka kacsiga?
Waxaan leeyahay saaxiibo dhowr ah oo, markaan isula nimaadno, had iyo jeer i siiya figrado badan oo ku saabsan alaabooyin cusub oo loogu talagalay Ragga Qaabka leh….
Baarkooda waa timo oo waxay la mid yihiin timaha oo dhan, waqtiyada qaarkood waxay u dhacaan si isdaba joog ah. Tani waa gebi ahaanba ...
Sidee ku ogaan kartaa inay sariirta iska dhigeyso?
Maxay haweeneydu uga been sheegtaa wax u dhow sida kacsiga? Iyo sida loo ogaado tan? Waan ogahay inay tahay ...
Burburkii, qabatin cusub
Burburku waa mid ka mid ah balwadaha kora isla markaana la xidhiidha isticmaalka aan kala sooca lahayn ee madoowga (ama ...
Miyaad u maleyneysay inaad kaliya ku gaari kartid galmoodka adigoo biyo bixinaya? Hagaag maya. Galmada ragga, wax walba lama siinayo ...
Madaxa-cad ee guska waa xaalad maqaar caadi ah oo maqaarka ragga ku dhaca. Waxaa sidoo kale loo yaqaan ...
Waa maxay candilomas?
Candillomas waa burooyinka xubnaha taranka ee uu sababo fayraska HPV (Human Papilloma Virus). Burooyinkaasi waxay saameeyaan ...
Maxaa la sameeyaa haddii gufku ku dhex dhaco dhalada jabto?
Weligaa kuguma dhicin inaad rabto inaad furto dhaladaas khamriga ah ee aad u jeceshahay ee gufku ahaa ...
Guska qalooca, ma caadi baa?
Saaxiibkay ayaa igu yidhi gaalnimo (waan ka xumahay Naty) inay nin la joogtay markii ay aragtayna ...
Buuxinta kaladuwan ee keega
Tarts waa mid ka mid ah suxuunta ugu fudud ee la sameeyo, iyo sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu taajirsan. Laakiin markii ...
Haddii aad rabto wax cusub, maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa cunto karis ku saleysan champagne, xitaa haddii aysan aheyn cabitaan laakiin ...
Talooyin ku saabsan sida loo kariyo rootiga macaan
Haddii aad waligaa u tagtay inaad ka iibsato kibis macaan dukaanka weyn ama kawaanka hilibka lagu iibiyo, waxaad arki jirtay inay jiraan laba nooc; a…
Imisa jeer ayaad galmoon doontaa noloshaada?
Mid ka mid ah su'aalaha aan isweydiineyno inta badan waa inaan ogaanno haddii nolosheena oo dhan aan awood u yeelan doonno galmo….
Sidee looga fogaan karaa qulqulka indhaha?
Dareenka indhaha, oo sidoo kale loo yaqaan 'subconjunctival hemorrhage', waa xaalad isha ku jirta, oo casaan isu beddelaysaa. Waa…
Waa maxay varicocele?
Varicocele waxaa loogu yeeraa fidinta xididdada oo ku teedsan xarigga manida ee taageera xiniinyaha….
Maxaan u hurudnaa jacayl kadib?
Mid ka mid ah dhaliisha iyo dagaalada aan la leenahay haweenkeena ayaa ah in fadhiga galmada kadib, ...
Ragga oo dhami waxay jecel yihiin inay isboorti sameeyaan, laakiin waa run in qaarkood ay ka raggan yihiin kuwa kale. Sida laga soo xigtay a ...
Waa maxay chillains?
Chilblains waa kuwa ku dhaca maqaarka oo ay sababaan socodka dhiigga oo liita, oo ay weheliso cuncun iyo xanuun….
Taariikhda koowaad: casuuma ama bixi nus?
Waxaad la kulantaa gabar oo aad weydiisataa iyada. Waa taariikhda ugu horreysa ee ay yeelan doonaan adigana waad la soo baxaysaa ...
Cabitaanka tamarta iyo cawaaqibkeeda
Cabitaanka tamarta ayaa ku soo badanaya moodada goobaha lagu caweeyo waana muhiim in wax laga ogaado ...
Waxaan ahaa qof aan aamin ahayn, ma qirayaa mise waan iska aamusayaa?
Sifiican ma ula socotaa lammaanahaaga, laakiin waxaad la baxday asxaabtaada, waxaad qaadatay badan oo waxaad noqotay aamin la'aan ...
Gabdhaha foosha xun iyaguna faaido ayey leeyihiin
Ragga leh qaabka waxaan marar badan kahadalnay gabdhaha ugu quruxda badan waligoodna fikrado kaladuwan ayaa jiray laakiin ...
Tabaha looga hortago fungus cagaha
Guga ayaa yimid mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee ragga waa muuqaalka fungus ee ...
Ragga hadaan nahay waan ognahay inay dumarku guud ahaan dhib badan yihiin oo ay adagtahay in la fahmo, laakiin waxaa jira waxyaabo aad awoodid ...
Waxaan horey uga soo hadalnay xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya ninka iyo naagta. Laga soo bilaabo Ragga qaabdhismeedka ah waxaan niri ...
Dhawr jeer ayaanu idiin soo bandhignay badeecooyin diyaar u ah inay cabaan maantana waa kiiska Jack Daniel, kaas oo ...
Sidee loo ilaaliyaa whiskey?
Whiskey, mid ka mid ah cabitaannada aan ugu jeclahay, waxaa loo tixgeliyaa cabitaan ruux. In kasta oo ay leedahay jir ku filan, si loo ilaaliyo waxay u baahan tahay ...
Horay waad u ogtahay waxa Viagra ay tahay hadaadan wali aqoonna, Hombres con Estilo waxaan kaaga sheegi doonaa ...
Maxaa la cabayaa cashada kadib?
Casho wanaagsan kadib, is biirsaday ayaa lagama maarmaan u ah lasocodka cashada kadib. Ujeedada cabitaankani maaha ...
"Sexlets", viagra ee xanjada la ruugo
Haddii aad dhibaatooyin xagga galmada ah qabtid, markaas 'Sexlets' ayaa kuu noqon doonta xulafadaada ugu fiican. Waxay ku saabsan tahay xanjo xoojiyayaasha galmada, kordhinta ...
Saamaynta uurku ku leeyahay ragga
Ragga badankood waxay rumeysan yihiin in uurka kaliya uu ku dhaco dumarka maadaama ay yihiin ...
Maxaa lagu dheereynayaa?
Had iyo jeer waxaan dhahnaa kahor iyo kadib sameynta isboorti, waa inaan sameynaa jimicsi dheereyn ama fidin ah, oo sidoo kale loo yaqaan ...
Sidee loo codsadaa guurka qaab asal ah?
Haddii aad ka fekereyso inaad hal talaabo u sii qaaddo lammaanahaaga oo aad soo jeediso guur, markaa waxaan talo kaa siin doonaa ...
Khuraafaadka iyo xaqiiqooyinka ku saabsan ka hortagayaasha
Labada kilkil ee kilkilaha iyo inta kale ee maqaarka jirkeena waxay u baahan yihiin in la daryeelo. Sidaas,…
Dhowr bilood ka hor waxaan ku dhawaaqnay Hombres con Estilo oo ku saabsan soo saarista kiniin cusub oo lagu xakameynayo biya baxa ...
Rag badan, duruufo kala duwan awgood, waxay u muuqdaan inay xirtaan koofiyado xad dhaaf ah, iyagoo ilaaway isticmaalka joogtada ah ee dharkan inuu ...
Leyli Lugta: Femoral (III)
Anaga oo ku sii soconayna sharraxaadda jimicsiga lugaha, iyo murqaha muruqyada oo si gaar ah loo leeyahay, hadda waxaan kuu keenaynaa Ragga ...
Xanuunka cusub ee aad uga hadlaya taleefanka gacanta
Teknolojiyada ayaa horeyba noo qaadatay dhammaan kiisaska nolol maalmeedka. Waxaan u adeegsanaa kumbuyuutarka shaqada, ...
Daryeelka saxda ah ee guska
Guska waa qeyb aasaasi ah oo jirkeena ah. Waxay fulisaa shaqooyin badan, oo ay ku jiraan taranka. Sidaa darteed, waa inaan ...
Khuraafaadka iyo runta Viagra (iyo II)
Dhowr maalmood ka hor waxaan ku bilownay xulitaankan khuraafaadka iyo runta isticmaalka Viagra. Kadib adiga ...
Sidee loo yareeyaa rabitaanka galmada?
Rag badan ayaa raba inay yeeshaan rabitaan galmo oo aad u badan noloshooda, laakiin waxaa jira kuwa kale oo runtii doonaya ...
Sidee loo dhoola cadeeyaa?
Waa la aqbali karaa in muddo ah cabsida kursiga dhakhtarka ilkaha iyo xiriirkiisa lama huraanka ah ee leh hawlo dhaadheer ...
Markii la bilaabay Viagra dhawr sano ka hor, dhowr khuraafaad ayaa laga sheegay isticmaalka kiniinka buluugga ah blue.
Sidee loo helaa gacmo calaamadeysan?
Riyada nin waliba waa in gacmihiisa loo calaamadeeyo si uu dumarka hortooda ugu muujiyo. Waa taas iyaga ...
Sidee loo sameeyaa is-baaritaanka xiniinyaha?
Kansarka xiniinyaha waa mid ka mid ah kansarka ugu caansan laakiin sidoo kale kan ugu daaweynta badan waa ...
Orgasyo badan oo ninka ku jira?
Dumar badan ayaa ku riyooda in ay yeeshaan gacaliye socon kara oo socon kara habeennada oo dhan, gaarana qancis buuxa iyo awood u yeelashada ...
Maalmo ka hor waxaan ka hadalnay kansarka qanjirka 'prostate', laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa nooc kale oo kansar ah oo isna ...
Ur xun oo guska ah
Gusku wuxuu leeyahay ur gaar ah oo dabeecad u leh qof walba. Dhibaatadu waxay tahay marka urku u adkaysan waayo oo ...
Ka dib xiirashada, finanka dhibta badan ayaa badanaa soo muuqda. Marar badan, ka dib xiirashada dhow, caarada timaha ...
Muhiimadda nasashada ee dhaqdhaqaaqa jirka
Tababarka jirka ee wanaagsan marka lagu daro diirimaadka, fuuq-celinta iyo cunno isku dheelitiran waxaa ka mid ah nasasho wanaagsan si aad ...
Tilmaamaha sida wanaagsan loo qeexay maqnaanshaha
Maqnaanshaha la calaamadeeyay ayaa ka badan wax kasta oo lagama maarmaan u ah qurxinta adduunka galbeedka, oo ay doonayaan dad badan oo ay gaareen ...
Lemoncello, oo asal ahaan ka soo jeeda Talyaaniga, ayaa caan ka ah dalkeenna waxayna badanaa ku siiyaan maqaayadaha ka dib ...
Khabiir ku takhasusay cilmiga galmada ayaa na waaninaya ...
Yaa ka fiican xirfadle iyo naag inay nagala taliyaan sida loola dhaqmo jinsiga ka soo horjeeda, Pilar Cristóbal oo ka socda wargeyska 20 ...
Maxaan isku dari karaa vodka si aan u sameeyo is biirsaday?
Vodka waa mid ka mid ah cabitaannada loo isticmaalo diyaarinta is biirsadayda ugu caansan. Laakiin ogaanshaha maaddooyinkaas ...
Cudurka 'Cryptorchidism' waa cudur ku dhaca ragga isla markaana si qumman u ah xiniinyaha. Cudurkan, oo sidoo kale loo yaqaan ...
Ka takhalusida balwadda marwalba waxay keentaa ka noqosho astaamahaasna waa in lagu maareeyaa si loola dagaallamo iyadoo la adeegsanayo anshax si loo awoodo ...
Syphilis waa cudur galmada lagu kala qaado (STD) oo uu keeno jeermis lagu faafiyo galmada siilka, ...
Sidee herpes-ka xubnaha taranka ku dhaca?
Cudurka xubinta taranka waa cudur ku dhaca maqaarka oo uu sababo fayras. Cudurkaan waxaa lagu kala qaadaa galmada, badanaa wuxuu ku faafaa ...
Titan T1 Gym, jimicsiga gurigaaga
Kuwa ay ku adag tahay inay ka baxaan guryahooda si ay u aadaan jimicsiga sababtoo ah cimiladu waa mid fool xun ama ...
Sidee looga takhalusaa khamriga?
Waxay u badan tahay in, inta lagu jiro dhamaadka usbuuca ama maxaa diidaya saacado kadib shaqada kadib inaad tagto ...
Jimicsiyada si looga fogaado xanuunka dhexda
Waxaan horey uga soo hadalnay marar badan oo ku saabsan xanuunka dhabarka hooseeya iyo sida aan uga fogaan karno xanuunkaas xun. Maanta waxaan wax badan ka caawin doonnaa sidii ...
Rooti rooti Neapolitan ah
Marar badan ma dareemeyno inaan wax karineyno ama aan waxba ku haysan qaboojiyaha. Daqiiqadahaas waxay ku habboon tahay in la qabsado ...
Haddii aad ka fekereyso inaad orod sameyso oo aad xaalad jir ahaaneed oo wanaagsan haysato, ka dib akhri waxaad arki doontaa kuwa badan ...
Isku dhafan oo qumman: khamri iyo farmaajo
Anaga ahaan, iskudhafka ugufiican ee khamrigu waa jiis ... laakiin waligaa miyaad moodeysay in farmaajo uu kafiicanyahay ...
Miyaad ku xanuunsataa taraafikada gaabiska ah?
In kasta oo ay ku badan tahay socodka tartiib-tartiibka ee haweenka, waxaa jira rag badan oo la il-daran calool-fadhiga. Calool fadhiga ...